चेपाङ समुदायमा परिवर्तन सम्भव छ : केपी किरण शर्मा | चितवन पोष्ट दैनिक
चेपाङ समुदायमा परिवर्तन सम्भव छ : केपी किरण शर्मा
२०७६ बैशाख २२, आईतवार ०८:४८ गते
गोरखाको दर्बुङमा विसं २०२८ साउन १५ गते जन्मिएका केपी किरण शर्मा हाल रत्ननगर १२ चितवनमा बस्छन् । केही वर्ष कतारमा श्रम गरेका उनी नेपालमै रहेर सामाजिक क्षेत्रमा केही गर्नुपर्छ भन्ने सोचले ०६५ साउन १७ गते नेपाल झरे । सदाका लागि विदेश नजाने प्रण गरेर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमै पासपोर्ट च्याते । ०६५ साउन १८ गते चितवन टेकेका उनले सुरूमा गामबेँसीको खबर नामक पत्रिका सञ्चालन गरी मिसन पत्रकारिता गरे । चेपाङको सेरोफेरोमा रही बालबालिकालाई शिक्षाको मूलधारमा ल्याउन उनले पत्रिकाको कमाइबाट २७ जना चेपाङ छात्रालाई २०६८ सालसम्म छात्रवृत्ति प्रदान गरे । २०६९ सालमा गामबेँसीको चेपाङ संरक्षण केन्द्रमार्फत् बालबालिकालाई शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले थालनी गरेको उनको अभियान जारी छ । केन्द्रको छात्रावासमा रहेर अहिले १५२ बालबालिकाले पढिरहेका छन् । असहाय, विपन्न परिवारका बालबालिका छनोट गरी केन्द्रमा ल्याएका बालबालिकाले उत्कृष्ट नतिजा हासिल गरेका छन् । उनी चेपाङ समुदायकै भरोसाका पात्र बनेका छन् । चेपाङको अनिकालमा, दुःखबिमारमा, प्राकृतिक विपत्तिमा सारथिको भूमिका निभाउँदै आएका शर्मा अनवरतरुपमा चेपाङ समुदायकै उन्नयनमा समर्पित भइरहेका छन् । प्रस्तुत छ, अभियन्ता शर्मासँग चितवन पोष्ट दैनिकका सहसम्पादक केशव भट्टराईले गरेको संवाद–
१) व्यस्त नै देखिनुहुन्छ । चेपाङ संरक्षण अभियान कसरी अगाडि बढ्दैछ ?
– चेपाङकै हितका निम्ति व्यस्त भइरहेको छु । अहिलेसम्म समाजमा सकारात्मक सोच भएका मानिसको सपोर्टकै कारण गामबेँसीको चेपाङ संरक्षण केन्द्र चलाइरहेको छु । सहृदयी मन भएका व्यक्तिहरुको सहयोग र सद्भावका कारण अहिले १५२ जना चेपाङ बालबालिकाले पढ्न पाएका छन् । मेरो अभियान जारी छ । विसं २०८० सालसम्म विभिन्न क्षेत्रमा केन्द्रको शाखा विस्तार गरी एकहजार जना पिछडिएका गरिब, असहाय चेपाङ बालबालिकालाई शिक्षा प्रदान गर्ने संकल्प लिएको छु ।
२) चेपाङ केन्द्र कसरी चलिरहेको छ ?
–सुरू–सुरूमा निकै कठिनाइँ थियो । चुनौती त अहिले पनि छ । अहिलेको अवस्थासम्म आइपुग्दा यसको ठूलो सञ्जाल बनिसकेको छ । जन्मदिन, पुण्यस्मृति, विवाह वर्षगाँठमा गरिने फजुल खर्च सामाजिक कार्यमा लगाउने प्रचलन बढ्दो छ । सामाजिकरुपमा केही न केही उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्छ भन्ने भावना मानिसहरुमा जागृत हुँदै गएको छ । त्यसकारण केन्द्रलाई केही सहज भएको छ । यसका साथसाथै विदेशमा रहनुहुने नेपालीहरुले निकै माया गर्नु भएको छ । उहाँहरुको सहृदयी मनकै कारण केन्द्रलाई भरथेग भइरहेको छ ।
३) केन्द्रमा आश्रित बालबालिकाको शैक्षिक प्रगतिचाहिँ कस्तो छ ?
–अवसर पाए चेपाङ बालबालिकाले पनि शैक्षिक सफलता हासिल गर्न सक्दा रहेछन् भन्ने दृष्टान्त केन्द्रका बालबालिकाले प्रमाणित गरेका छन् । केन्द्रमा रहेर पञ्चतेज ज्योति आधारभूत विद्यालय र बैरिया माविमा अध्ययनरत बालबालिकाले विगत पाँच वर्षयता लगाताररुपमा कक्षा १ देखि ९ सम्म नै प्रथम, द्वितीय र तृतीय स्थान चेपाङ बालबालिकाले हासिल गरेका छन् ।
४) केन्द्रमा १५२ जना विद्यार्थीको व्यवस्थापन कसरी गर्नुभएको छ ?
–केन्द्रमा बालबालिकाको व्यवस्थापन कुशल ढंगले भइरहेको छ । साना बालबालिकाको हेरचाह र सरसफाइ व्यवस्थापक दिदीमार्फत् भइरहेको छ । उनीहरु अनुशासित छन् र सबैजना केन्द्रको सिस्टममा बस्छन् । खान्छन् । आफूले गर्नुपर्ने सरसफाइदेखि आ–आफ्नो भूमिकाका कारण स्वव्यवस्थित छन् । केन्द्रमा छात्र र छात्राको छुट्टाछुट्टै छात्रवासको व्यवस्था छ । छात्राको लागि सुविधासम्पन्न छात्रावासको निर्माण सम्पन्न हुँदैछ । बालबालिकाको आवासीय व्यवस्थापनको भन्दा पनि उनीहरुलाई खानपिनको व्यवस्थापनको चुनौती बढी छ । केन्द्रमा दैनिक एक क्विन्टल चामल खपत हुन्छ । त्यहीअनुसार तरकारी, नूनतेल, मसला चाहिन्छ । सबैभन्दा बढी पिरलो त कम्तीमा एक महिनासम्म पुग्ने खाद्यान्नको जोहो गर्नुमै रहन्छ । एक महिनालाई पुग्ने खाद्यान्न जुटेको अवस्थामा मनमा छुट्टै खुसी छाउँछ । चेपाङ गाउँमा पेटभरि खान नपाएका, नाङ्गो आङ ढाक्न नसकेका बालबालिकालाई पेटभरि खुवाएर मध्यमवर्गीय परिवारका सन्तानलाई जसरी राख्नु आफैँमा ठूलो व्यवस्थापन हो जस्तो मलाई लाग्छ ।
५) विद्यालयमा भर्ना अभियान चलिरहेको छ । नयाँ भर्नाका लागि विद्यार्थी छनोट कसरी गर्नुहुन्छ ?
–गाउँगाउँमा पढ्न जाने उमेरका विद्यार्थी थुप्रै छन् । कतिपयको पारिवारिक अवस्थाका कारण भर्ना भएर पनि बीचैमा कक्षा छोड्ने अवस्था आउँछ । गाउँबाट सबै बालबालिकालाई एकैचोटि केन्द्रमा ल्याउन पनि सम्भव हुँदैन । म केन्द्रमा खाद्यान्न जुटाइसकेपछि हरेक महिनाको एकसाता चेपाङ गाउँमा डुल्ने गर्छु । गाउँमा घुम्दा डुल्दा दुःख पाएका र पढ्ने चाहना भएका अनाथ, असहाय र नाजुक अवस्था भएका बालबालिकालाई छानेर सम्बन्धित निकायको सिफारिसका आधारमा केन्द्रमा ल्याएर भर्ना गर्ने गर्दै आएको छु ।
६) बालबालिका खोज्ने र पढाउनेबाहेक चेपाङ समुदायका लागि अरु के योगदान गर्नुभएको छ ?
–बालबालिकालाई पढाउने कार्य त निरन्तर छँदैछ । त्यसका अतिरिक्त गाउँमा कोही बिरामी परे, उपचार पाएनन् भने तिनीहरुलाई भरतपुर अस्पतालसम्म लैजाने, व्यवस्थापनमा सहयोग गरिदिने काम गर्छु । भरतपुर अस्पतालमा चेपाङ समुदायका लागि सम्पूर्ण उपचार निःशुल्क हुन्छ । तर त्यो प्रक्रिया झन्झटिलो छ । सबै चेपाङले आफूले पाउने सुविधा लिन सकिरहेका हुँदैनन् । त्यसका लागि हामीले सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । गाउँमा प्रायः खरले छाएका झुपडी घर हुन्छन्, सुख्खायाममा आगलागी हुने, वर्षायाममा बाढीपहिरोले क्षति पुग्ने हुन्छ । यस्तो प्राकृतिक विपत्तिमा थुप्रैपटक सहयोग जुटाएका छौँ । विकट क्षेत्रमा स्वास्थ्य शिविर लैजाने, जाडो मौसममा न्यानो कपडा वितरण गर्ने, दसैँतिहारजस्ता चाडपर्व र अनिकालको समयमा खाद्यान्न सहयोग गर्नेजस्ता गतिविधि गर्दै आएका छौँ ।
७) केन्द्रमा आश्रित छात्रछात्राले केकस्ता प्रगति गरेका छन् ?
हामीले छोटो समयमै लक्ष्य हासिल गर्न सक्यौँ भन्न त मिल्दैन । तर मैले देखेको सपना पूरा हुने क्रममा रहेकोचाहिँ मैले अनुभूत गर्दछु । चेपाङ जातिको पहिलो सिभिल इन्जिनियर हमीले नै पढाइरहेका छौँ । इच्छाकामना गाउँपालिका हात्तीवाङकी शर्मिला चेपाङलाई हामीले नै मेसो मिलाएर स्टाफ नर्स पढाएका हौँ । उनले अहिले इच्छाकामना गाउँपालिका १ भाराङकै स्वास्थ्यचौकीमा रहेर सरकारी जागिर खाँदै चेपाङ सुमदायको सेवा गरिरहेकी छन् । अबको तीन÷चार वर्षभित्र देखिनेगरी प्रतिफल निस्कने छ । हामीले शिशु कक्षाबाट पढाउन सुरु गरेका बालबालिका अहिले कक्षा ८ मा पुगेका छन् । त्यसैले परिणाम देखिन केही समय प्रतीक्षा गर्नैपर्ने हुन्छ ।
८) तपाईंको अभियानमा सरकारको सहयोग कत्तिको छ ?
हामी सरकारका सहयोगी अंग हौँ । अहिलेसम्म हामीले जेजति काम गरिरहेका छौँ, त्यो सबै सरकारलाई नै सघाइरहेका हौँ भन्ने मलाई लाग्छ । स्थानीय सरकारले पनि हामीलाई निकै प्रेरणा र हौसला प्रदान गर्दै आएको छ ।
९) बेलाबखत केन्द्रमा हाहाकार परेको स्टाटस देखिन्छ । केन्द्रको मुख्य स्रोत के हो र कसरी जुटिरहेको छ ?
हाम्रो दैनिक आम्दानीको स्रोत भनेकै देशविदेशमा रहनुहुने ती तमाम सहृदयी महानुभाव हुनुहुन्छ । जसको निरन्तर सहयोगले नै हामी आजको दिनसम्म यो मुलबाटोमा आइपुगेका छौँ । मैले अघि पनि उल्लेख गरेको छु कि केन्द्रमा दैनिक एक क्विन्टल चामल, तरकारी र नुनतेल खपत हुन्छ । केन्द्रमा खाद्यान्न सकियो भने मैले फेसबुकमार्फत् केन्द्रको वास्तविक स्थिति उजागर गर्ने गर्छु । त्यही स्टाटसकै माध्यमबाट घुमिफिरी निकै व्यक्तिहरु सहयोगको पोको बोकेर हाम्रो केन्द्रमा आउनुहुन्छ । विदेशमा रहनुहुनेले मेरोतर्फबाट यो सहयोेग भनेर सन्देश पठाउनुहुन्छ । यसरी नै केन्द्रमा सहयोग जुटिरहेको छ । विभिन्न संघसंस्था वा महानुभावले वार्षिकोत्सव, जन्मदिन, पुण्यस्मृतिमा केन्द्रमा उपस्थित भएर सहयोग गर्नुहुन्छ ।
१०) तपाईंलाई के कुराले विरक्त बनाउँछ ?
समाजमा दुईवटा पाटो हुन्छन् । एउटा सकारात्मक सोच भएका र अर्को नकारात्मक सोच बोकेका । नकारात्मक सोच बोकेका व्यक्ति वा समूहबाट यदाकदा अभियानमा भाँजो हाल्ने काम हुन्छ । यसलाई मैले भाँजोभन्दा पनि चुनौतीका रुपमा स्वीकारेको छु । त्यतिबेला क्षणिकरुपमा चसक्क भए पनि अधिकांश समय चेपाङ समुदायकै विषयमा सोचिरहेको हुन्छु । सामाजिकरुपमा अझै मैले धेरै काम गर्न बाँकी छ भन्ने लाग्छ । सकारात्मक सोचको बलले नै आजका दिनसम्म म निरन्तर अघि बढिरहेको छु ।
११) चेपाङका नाममा सहयोगको ओइरो लागेको सुनिन्छ तर अवस्थाचाहिँ उस्तै रहनुको कारण के हुनसक्छ ?
नेपालमा चेपाङको नाम भजाएर खाने थुप्रै छन् । यो क्रम पञ्चायतकालदेखि गणतन्त्रकालसम्म जारी छ । चेपाङको जीवनस्तर सुधार्न लगानी उचित ठाउँमा गर्नुपर्छ । २०६९ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई चितवनको सबैभन्दा पिछडिएको सिद्धि गाविस आउनुभएका बेला मैले बाख्रापालनमार्फत चेपाङको जीवनस्तर सुधार्न सकिने प्रस्ताव गरेको थिएँ । जसअनुसार सिद्धिका ९ वटै वडामा गरिबी निवारण कोषमार्फत् बाख्रापालनका लागि लगानी भयो ।
म २०६५ सालमा सिद्धि पुग्दा गाविसभरिमा २/३ वटा साइकल थिए । गाउँभरिबाट दसैँताका २÷३ लाखका खसीबोका बाहिरिन्थे । मैले सिद्धिमा ३० वटा समूह गठन गरेर प्रत्येक समूहलाई २ लाख ५० हजारदेखि ४ लाख रुपैयाँसम्म गरिबी निवारण कोषमार्फत् पैसा परिचालन गरेँ । अहिले हेर्दा साँच्चै सिद्धिको कायापलट भएको छ । गतदसैँमा सिद्धिबाट पाँच करोडभन्दा बढीको खसीबोका बाहिरिएको छ ।
त्यो गाउँमा मैलेमात्रै गरेर त्यो सबै परिवर्तन भयो भन्ने घमण्ड त गर्दिन । अरु संघसंस्था पनि प्रसस्तै लागिपरेका छन् । जस्तै सपना भिलेज सोसल इम्प्याक्ट, मोनालिसा, हेफर इन्टरनेसनललगायतको पनि छुट्टाछुट्टै पाटोमा लगानी भएको छ । इमान्दारितापूर्वक काम गर्ने हो भने परिवर्तन सम्भव छ भन्ने उदाहरण पनि सिद्धिले देखाएको छ ।